Karazan-tsoavaly | Soavaly Noti
Misy maro Karazan-tsoavaly, ny ankamaroan'izy ireo dia tsy fantatsika akory satria azo antoka fa mitovy amintsika rehetra izy ireo. Saingy tsy toy izany eo amin'ny tontolon'ny soavaly hitantsika soavaly maro, amin'ny habe samihafa, amin'ny fiaviany samihafa, amin'ny fitaovana samihafa, sns.
Amin'ity habaka ity dia ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ny soavaly sy ny karazana efa misy hahafantatra azy ireo bebe kokoa ary hianatra bebe kokoa momba ny tsirairay amin'izy ireo. Ho fanampin'ny torohevitra sy pitsopitsony rehetra ho an'ny fikojakojana azy amin'ny ankapobeny, mifandraika amin'ny karazana karazany tsirairay. Ny marina dia mahaliana ny mandinika ireo soavaly maro karazana izay misy, indraindray ny tsy fahalalana dia manidy antsika ny fahaizana mankafy zava-baovao, amin'ity fotoana ity karazana soavaly misy an'izao tontolo izao.
Vokatry ny fivoarana miandalana, ny rafitry ny soavaly dia namoaka fiovana vitsivitsy. Ireo fiovana ireo dia toa ...
Rehefa miresaka momba ny karazana Equine tsara indrindra isika, dia tsy isalasalana fa ny Arabo dia matetika amin'ireo ankafizin'ireo mahalala ...
Drafitra soavaly no ampiasaina amin'ny asa noho ny fahaizany mamikitra. Araka ny fomban-drazana dia ...
Ny karazan-tsoavaly Hackney, antsoina koa hoe Norflok Trotter, dia avy any Angletera ary ankasitrahana tokoa noho ny ...
Ny mpitaingin-tsoavaly sasany dia manana fomba amam-panao antsoina hoe trot izay nahasarika mpankafy fanatanjahantena equine maro sy mpiompy. Izany dia…
Gypsy vanner, ny «soavaly Gipsy»
Ny niandohan'ny karazany Gypsy Vanner, izay fantatry ny besinimaro amin'ny anarana hoe «soavaly gypsy», dia nanomboka tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato ...
Ilay soavaly Carthusian, antsoina koa hoe «Cerrado en Bocao», dia nahazo io anarana io satria nanomboka novokarin'ireo moanina carthusian ...
Teratany Asturias, ny Asturcón dia ao anatin'ny hazakazaka izay, tamin'ny andro taloha, nonina ireo faritany manomboka amin'ny ...
Ao amin'ny tontolo Equine, fantatry ny rehetra fa ny soavaly dia biby goavambe ary ny soavaly dia ...
ny Jenny monge hace 4 taona .
Ny soavaly trakehner dia nipoitra tany Prussia Atsinanana, ao amin'ny faritra iray izay an'i Alemana, avy eo amin'i Russia sy ...